Haddii aad gabar tahay oo ka yar tahay 18 sano waxaad la xariiri kartaa heeganka dumarka- ama gabdhaha ee degmadaada. Degmooyinka sida ay u badan yihiin waxay leeyihiin heeganka dumarka qaar badan oo ka mid ahina waxay leeyihiin heegan gabdhood. Heeganka dumarka –iyo gabdhaha waxaad la xariiri kartaa adiga oo aan u sheegin qofka aad tahay, haddii aad halkaas wacdana badanaa adiga waxay kuu tahay lacag la’aan, kamana muuqanayso qarashka taleefanka. Qaar badan oo ka mid ah heeganada gabdhaha ayaa waxay leeyihiin mayl iyo qad internetka oo lagu sheekaysto oo adiga oo is qarinaya aad kula hadli kartid, cidna ku guma xujaynayso in aad dacwo geyso ama aad mowqif si kale u qaadato. Heeganka dumarka –iyo gabdhuhu waxay badanaa xiriir fiican ku leeyihiin booliska iyo xafiiska adeegga bulshada waxayna aqoon karaan cidda ay wanaagsan tahay in lala hadlo haddii loo baahdo.
Haddii aad wiil tahay oo ka yar tahay 18 sano waxaad la xiriiri kartaa heeganaka nimanka ama heeganka wiilasha. Haddii aad wacdo heegan nin-ama heegan wiilal waa is qarin kartaa dhibaatadaadana waxaad kala hadli kartaa qof ku dhagaysanaya. Waxaa kaloo jirta fursad ah in aad cid kala xiriiri kartid qadka internetka ee www.killfragor.se ama www.umo.se haddii la robo warbixin iyo taageero.
Haya’adaha sida booliska ama xafiiska adeegga bulshada waxaa saran waajib ah in ay geeyaan dacwo haddii ay ogaadaan in qof dambi loo geystay ama qof 18 sano ka yar si dhaawac u gaarayo.
Waxaa la dareemi karaa in ay tahay talaabo aad u weyn in la qaadayo, sidaas darted ayay naruuro tahay in lala hadlo cid aanu saarnayn masuulkaas ah in ay dacwo geeyaan ama qof jooga meel aadan u baahnayn in aad sheegto qofka aad tahay, sida; heeganaka gabdhaha- ama dumarka ama kan wiilasha ee killfragor.se sidaas ayaad ku tijaabin kartaa ra’yigaaga kuna shaandhayn kartaa fikarkaaga si deggen.
Cid waliba waa ay la xiriiri kartaa xafiiska adeegga bulshada sida ugu sahlan ee aad taas ku samayn kartaana waa adiga oo waca taleefanka guud ee xiriiriska ee degmada oo aad ka cadsato in aad la hadasho xafiiska adeegga bulshad qaybtiisa qaabilaadda. Mardkii aad u macnayso dhibkaaga waxaa lagu siinayaa ballan aad kula hadasho gacan-haye qaabilasan meelaha qarsoodiga ah ee la dejiyo dhallinyarada. Da’ kasta oo aad jirto iyo jinsi kasta oo aad tahayba waa waajib saaran xafiiska adeegga bulshada in ay ku caawinaan. Waana sidoo kale haddii karaankaagu si u dhimmman yahay. Haddii karaankaagu dhimman yahay waa ay ka adkaan kartaa in qoyskaagi laga tago iyo in laguu helo hooy kale oo ku anfacaaya. Laakiin dadka kale xuquuqda ay leeyiin ayaad leedahay dhinackasta, xafiiska adeegga bulshaduna waajib ayay ku tahay in ay ka shaqeeyaan in aad caawinaad hesho. Haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay in aad ka tagto qoyskaaga xafiiska adeegga bulshadu waxay kuu soo jeedin karaan in lagu geeyo hooy heeagan leh. In loo tago hooy heegan leh macnaheedu waxa weeye inaad u tagayso qoys kale oo xafiiska adeegga bulshadu soo baaray oo loo arko in uu reer wanaagsan yahay. Waxaa laga yaabaa in ay dhallin yaro kale gurigaas joogaan. Guriguna wuxuu noqon karaa villa ama guri qayb ka ah dhisme weyn oo qoysas badan u kala qaybsan. Inta aad deggen tahay hooygaas heeganka leh ayaa xafiiska adeega buldhadu baarayaan haddii la xallin karo borobaleemkii qoyskaaga oo markaasna aad ku soo noqon karto gurigiini. Haddii dhibkii la xallin waayo ama laguu geysto xoog ku maquunin noocyo kala duwan ama xad-gudub xun waxaa laguu rari karaa hooy aad ku noolaato ilaa aad ka weynaato oo aad adigu is bixin karto. Kuwaas oo loogu yeeraa hooy qoys.